Budata Beach Buggy Racing maka Windows
Budata Beach Buggy Racing
Free Budata maka Windows (84.50 MB)
Budata Beach Buggy Racing,
Beach Buggy Racing, nke na -enye egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala na -atọ ụtọ na kọmpụta desktọọpụ yana ngwa ya ewepụtara maka Windows 8.1 mgbe mmalite nke ọma ya na ngwaọrụ mkpanaka, mepere onwe ya na ndị ọrụ ọhụrụ negbughị oge, nagbanyeghị na ọ bụ egwuregwu nke abụọ nusoro. Egwuregwu a na -atọ ụtọ, nke nde mmadụ iri atọ ebudatara ma kpọọ gburugburu ụwa, yiri Mario Kart nụdị. Kwalite ngalaba nwere akara ajụjụ na egwu ọ bụla ị na -asọ mpi negwuregwu na -enye gị ike 25 dị iche iche. Enwere nhọrọ dịka ọsọ turbo, ngwa ọgụ na ọnyà netiti ụdị ike ndị a nke ị ga -abụ uru na asọmpi ahụ. Ugbu a onye ọ bụla nwetara ohere ...
Isi ihe ị na -enweta site nịgba ọsọ na -enye gị ohere ịzụta ụgbọ ala ọhụrụ ma ọ bụ ị nwere ike hazie nke ị nwere karịa. Site na nnukwu bulldozers ruo ụgbọ ala egwuregwu, ị nwere oke nhọrọ. Naka nke ọzọ, ịnwere ike itinye ndị ọkwọ ụgbọ elu na otu gị. Ebe ọ bụ na ndị ọkwọ ụgbọ elu ndị a nwere ikike pụrụ iche nke ha, ị nwere ike họrọ dịka egwu ahụ siri dị ma nweta nsonaazụ kacha mma. Enwere egwu 12 dị iche iche na -eche gị negwuregwu a nefu, egwu nke ọ bụla na -enyekwa ọmarịcha egwu na ọ funụ. Nime mpaghara a họọrọ dị ka ebe, enwere osimiri, ugwu mgbawa, apịtị na ebe ndị yiri ya. Naanị ihe ị ga-elezi anya ka ị ghara iwe iwe nke menu ịzụrụ in-app.
Beach Buggy Racing Ụdịdị
Nha faịlụ: 84.50 MB
Mmepụta: Vector Unit